Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Duulimaadyo toos ah oo ka yimaada Munich ilaa Dubai kuna sii jeeda Lufthansa hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Baahida badan awgeed, Munich waa xarunta saddexaad ee kooxda Lufthansa oo ku darsata Dubai jadwalka duulimaadkeeda, ka dib Frankfurt iyo Zurich.
Lufthansa waxay ku dhawaaqday waddo cusub oo Imaaraadku maro.
Laga bilaabo Oktoobar 1, 2021, Lufthansa waxay joogsataa joogsi la'aan Munich ilaa Dubai.
Saddex duulimaad toddobaadle ah oo ay la socoto Airbus A350-900.
Haddii aad rabto inaad kordhiso xagaagaaga, hadda waa fursadda ugu fiican ee sidaas lagu sameyn karo. Xilliga loogu talagalay xilliga qaboobaha-sanadka oo ku beegan furitaanka EXPO, Lufthansa ayaa ka duushay Munich si toos ah Dubai.
Laga bilaabo Oktoobar 1 illaa Abriil 23 - dhammaadka ciidaha Bavaria Easter - Airbus A350-900 ayaa saddex jeer usbuucii u duulaya Gacanka Beershiya.
LH 638 wuxuu ku bilaabmaa waqtiyada duulimaadka ugu fiican: Ka bixida Munich waa 10:30 pm, imaanshaha Dubai 6:40 am maalinta ku xigta. Duulimaadka soo noqoshadu wuxuu ambabaxayaa 8:30 am wuxuuna imaanayaa Munich 12:50 pm
“Waan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan ku siino meel soo jiidasho leh muddo dheer oo ah wado cusub oo ka timaadda Munich markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurku bilaabmay. Sababtoo ah baahida sare, Munich waa xarunta saddexaad ee Kooxda Lufthansa in Dubai lagu daro jadwalka duulimaadkeeda, ka dib Frankfurt iyo Zurich. Markii ugu horreysayna, rakaabkeennu waxay awoodi doonaan inay ka soo safraan Munich una safraan Emirates iyaga oo raacaya diyaaradda muddada dheer socota ee diyaaraddayadayada: Airbus A350-900, ”ayuu yidhi Stefan Kreuzpaintner, Madaxa xarunta Munich iyo Madaxa Iibka loogu talagalay Kooxda Lufthansa.
Lufthansa waxay horey uga duushay Munich kuna sii jeeday Dubai intii u dhaxeysay 2003 ilaa 2016, kii ugu dambeeyayna waxay la timid Airbus A330.
Caafimaadka iyo badbaadada rakaabka ayaa ah muhiimada koowaad ee shirkadda Lufthansa. Adeegyada lagu bixiyo diyaaradda iyo habraacyada ka hor iyo inta duulimaadku socdo ayaa haddaba loo waafajiyay shuruudaha sharciyeed ee hadda jira. Waxyaabaha kale, tan waxay quseysaa sharciyada masaafada ee raacitaanka iyo ka degida iyo waajibaadka xidhashada maaskaro caafimaad. Miirayaasha Hepa sidoo kale waxay nadiifiyaan hawada qolka, oo la barbar dhigi karo qolka qalliinka.